Ceeb bey kugu tahay Shame On You - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Bulshada Ceeb bey kugu tahay ...
Ceeb bey kugu tahay Shame On You
Warbaahinta qaarkeed ayaa noqotay goobo loogu shaqeeyo qabyaalada & qudhunka qabiilka. Nasiibdarada jirta dad badan oo aan aqoonta saxaafada waxba ka aqoon ayaa furtay website-yo, idaacado iyo telefishino. Qaar badan oo qaaqleyaal ah ayaa ka hadla baraha bulshada.
dhamaan dadkaa ku hawlan noolaynta qabiilka iyo qabyaalada Soomaali asaageed ka reebay waxay qaataan lacago ka yimid shisheeyaha oo loogu talo galay in lagu qayb-qaybiyo bulshada Soomaaliyeed. Waxaase waxaa ka daran kuwo camal la’aan guryo yurub ku yaal dhex fadhiya oo whatsapp ka ka samaystay Goobo ama Wadar-sheekaysi ay had iyo goor lasoo fadhiyaan qabyaalad iyo qudhun. Ma shaqo tagaan wax anfaca if iyo aakhiro ma bartaan.
Kuwaa qaarkood reerahoodii, caruurtoodii, waalidkood iyo walaalahood meelna kagama war hayaan. 24 saac waa dhurmayaan waxay ku dhurmayaana wax dani ku jirto maaha. Waali halka ay ka gaadheen marba reer ayay isku qaadayaan oo dhaleecayn dusha ka saarayaan. waxay u moodaan in Soomaalidu is dhaanto.Aqoon-gaabnidoodu waxay tustaa tolalka isma dhaantada ah ee Soomaalidu inay kala sareeyaan. Siyaasada beelaysan, ama kooxaysan.
aad waxaan uga xumahay warbaahin la rabay inay hormuud noqoto inay kusoo uruurtay wax aan micno lahayn iyo nin khaldan taageeradii reernimo lagu taageerayo. may fahamsana in dadka oo dhami ogsoonyahay in Soomaaliya lagusoo duuley oo shisheeye bixinayo kharashka layskaga horkeenayo. may garansana in Alle joogo taladuna tiisa oo qudha noqon doonto.
Previous articleHadalka Churchill u ekaa mabda’a Soomaalida maanta
Next articleShirkad Mareykan ah ayaa soo afjartay qandaraaskii ay kula jirtay xarunta Sacuudiga ee la xidhiidhay dilkii Khashoggi
Hadalka Churchill u ekaa mabda’a Soomaalida maanta
Ma ogtahay inay jireen dad daawasho daraadeed debedaha loo dhoofin jirey
Khatarta ay leeadahay Kiimikada Warshaddaha Isbuunyadu
Hassan Mohamud - November 8, 2021
18 people are reported dead after an artisanal gold mine in the Maradi region of southern Niger, near Nigeria collapsed on Sunday.
UN report: Ethiopia war marked by extreme brutality
Sudan braces for for more anti-coup rallies as army promises new...
Paris museum exhibits Benin’s treasures for the last time
Mega-projects, world-leading developments, build China’s transportation strength